NORIKA. Anyị na-etolite a varietal ebu - Journal "Potato System"
Isi Ndụmọdụ ọkachamara
в Ndụmọdụ ọkachamara, News
Okwuntughe di iche-iche
N'ịga n'ihu na isiokwu nke ịhọrọ ụdị nduku maka ịkụ ihe, anyị na-atụ aro ka ị tụlee ụkpụrụ nke ebuga varietal.
Isi njirisi maka ịhọrọ ụdị dị iche iche bụ ịdị adị nke ahịa kwụsiri ike maka ya na uru. Akụkụ akụ na ụba n'oge anyị ka na-ekere òkè kacha mkpa. Ọzọkwa, a na-eburu n'uche ala na agro-climatic ọnọdụ nke akụ na ụba, nguzogide dị iche iche na ọrịa na idobe àgwà.
Ụdị nduku ahọpụtara kwesịrị igosi n'ụzọ zuru ezu ikike ha nwere, na ihe ọkụkụ ga-esi na ya pụta kwesịrị ịdị mma.
Agro-ụlọ ọrụ, dị ka a na-achị, na-agbalị na-agụnye ha lineup iche iche dị iche iche na ngwa anya e ji mara na / ma ọ bụ ntụziaka ojiji - otú ugbo nwere ike gboo mkpa nke dị iche iche n'ji otu. Ịzụlite ọtụtụ ụdị "dị iche iche" n'ugbo na-enyere aka belata ihe ize ndụ mgbe mkpa ahịa na-agbanwe: dịka ọmụmaatụ, n'oge ụfọdụ, ụdị akpụkpọ anụ na-acha uhie uhie na-amalite na-achọsi ike, ọnụ ahịa ha na-ebili, ma ọnụ ahịa nke ndị na-acha ọcha na-adaba. . Ọ bụrụ na akụ na ụba nwere ma, ọ na-akwụ ụgwọ maka mfu na otu ntụziaka na-efu nke ọzọ.
Ọtụtụ na-eto ụdị ojiji dị iche iche (poteto okpokoro, ibe ma ọ bụ fries), na-enye mkpuchi maka mgbanwe ọnụahịa na ahịa nduku ngwa ahịa.
A na-eburu n'uche ihe ndị a niile na ọtụtụ nuances ndị ọzọ mgbe ị na-eke onye na-ebugharị ụdị. Kedu ihe ọ bụ?
Echiche a dabere n'ụkpụrụ nke nhọrọ nke ụdị dị iche iche, nke na-eme ka o kwe omume ikesa oge ọrụ nke ndị mmadụ na akụrụngwa (a maara na n'ọnọdụ ebe ndị na-akụ poteto na-arụ ọrụ na ụdị nke otu ripening, ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga-ekwe omume. ihe ubi dum olu nduku toro na ezigbo okwu).
Mia dị iche iche
N'ezie, nke a apụtaghị na iche niile maturation dị iche iche, si n'oge ripening ka mbubreyo, kwesịrị ugbu a lineup nke ọ bụla ugbo.
A na-emepụta ụdị dị iche iche mgbe niile na-eburu n'uche ọnọdụ nke ugbo (mpaghara, ọnọdụ ihu igwe) na ọrụ ndị ụlọ ọrụ na-esetịpụ onwe ya.
"Ọkpụkpụ azụ" nke ahịrị nke nkezi akụ na ụba nke Central Russia ma ọ bụ mpaghara Volga, dị ka a na-achị, bụ ụdị nke ọkara-n'oge na nke etiti, nke dị ntakịrị na-adaba na ụdị mmalite na ọkara-mbubreyo.
Yabụ, pipeline nhọrọ NORIKA nwere ike ịdị ka nke a:
N'oge (otu ma ọ bụ abụọ iche ịhọrọ): Akseniya (65 ụbọchị), Paroli (65 ụbọchị), Mia (75 ụbọchị), ego (75 ụbọchị);
n'etiti mmalite (ụdị abụọ ma ọ bụ atọ ịhọrọ): Baltic Rose (ụbọchị 80), Gala (ụbọchị 75-80), Kibits (ụbọchị 80);
etiti oge (otu ma ọ bụ abụọ iche ịhọrọ): Vega (85 ụbọchị), Wendy (85 ụbọchị), Inara (85 ụbọchị), Pirol (90 ụbọchị);
etiti oge (otu ma ọ bụ abụọ iche ịhọrọ): Merlot (105 ụbọchị), Albatross (110 ụbọchị).
Baltic Rose dịgasị iche iche
Mgbe ị na-ahọrọ ọnọdụ ụfọdụ, ọ dị mkpa iburu n'uche njirimara nke ụlọ ọrụ ugbo ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ugbo ndị dị na mpaghara kpọrọ nkụ na enweghị akụrụngwa ịgba mmiri ekwesịghị ịmalite ịgha mkpụrụ nke ụdị ịhụnanya na-ahụ n'anya.
A naghị atụ aro ka a kụọ ụdị nke etiti-n'oge na nke mbubreyo na mpaghara idei mmiri (loams, lowlands), mmiri ozuzo n'oge mgbụsị akwụkwọ nwere ike ime ka owuwe ihe ubi sie ike ma ọ bụ na-agaghị ekwe omume.
Ndị ọkachamara nke LLC "NORIKA-SLAVIA" - onye nnọchiteanya pụrụ iche nke onye na-azụ anụ NORIKA na Russia - na-agwa ndị ahịa mgbe niile na ọ dị mkpa ka a rụọ ọrụ dịgasị iche iche n'ọhịa ya iji chọpụta mkpa ya na ikike ya maka ịkụ ihe.
Ọ ka mma na-eru nkwubi banyere ma a dịgasị iche iche bụ adabara gị ugbo dabere na pụta ikpe plantings, na ahụmahụ otu iche iche kwesịrị rụrụ ma ọ dịkarịa ala afọ abụọ.
Na mmetụta mbụ banyere mmezu nke ozuzu nwere ike guzobe mgbe ịga na ngosi saịtị nke ozuzu na mkpụrụ ụlọ ọrụ.
LLC "NORIKA-SLAVIA" afọ a ga-eweta na ibuo plots dị iche iche dị ka: Akseniya, Paroli, Baltic Rose, Gala, Vega, Wendy, Mia, Inara, Merlot.
Obi ga-adị anyị ụtọ ịgwa gị ihe ndị ọzọ gbasara nke ọ bụla n’ime ha.
NORIKA-SLAVIA LLC bụ onye nnọchi anya onye na-azụ NORIKA na Russia
Nọmba: +7 (499) 922-05-50
Tags: nduku ndu nke NORIKA nhọrọ
Ihe kacha anyị mkpa n'ime afọ niile bụ akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi etolitere na Russia.
France ga-ewebata mmachibido ire ere akwụkwọ nri na nkwakọ ngwaahịa plastik